“महिनावारी भएको कति दिनमा सम्बन्ध राखे गर्भ रहन्छ ? फल राम्रो मिल्छ जानी राखौँ – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैली“महिनावारी भएको कति दिनमा सम्बन्ध राखे गर्भ रहन्छ ? फल राम्रो मिल्छ जानी राखौँ
January 6, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 9598
November 25, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 10779
स्व’स्थ रहनको लागि दिनभरीमा ८ देखि ९ गिलास पानी पि’उन आवश्यक छ । चिसो मौसममा हल्का मनता’तो पानी नै पिउनु फाइदाजनक हुने वि’शेषज्ञहरु बताउँछन् । पानी स्वा’स्थ्यको लागि निकै महत्वपूर्ण प’दार्थ हो । यसले श’रीरमा
January 21, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 8500
लगभग धेरै जनालाई सखरखण्डका फाइदाहरुको बारेमा थाहा होला तर तपाईंलाई सखरखण्डका यी गुणको बारेमा थाहा छ ,यदि छैन भने हामी तपाईलाई बताउछौ: १. सखरखण्डको पातले स्वास्थ्यमा हुने फाइदा:जाडो महिनामा पाईने सखरखण्ड आइरन ,भिटामिन बि (फोलेट),कपर
November 22, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 10795
हुन त बजारमा वा तपाईँको करेसावारीमा विभिन्न प्रजातीका सागहरु सजिलै पाउन सकिन्छ । तर, तपाईँले प्रयोग गर्ने सागहरुको प्रजातीमध्ये एक हो फर्सीको मुन्टो वा भनौ फर्सीको पातको साग । उसो त फर्सी पनि खानु हाम्रो
LEX 18 agenda conversation: Job club (445186)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418749)